မေစစ်ပိုင်| November 28, 2012 | Hits:636
8 | | မကြာသေးခင်က ယာဉ် ၉ စီး ဆင့်တိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့သည့် ဒေါပုံမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလ တံတားအဆင်း နေရာ (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ယာဉ်တိုက်မှု ကိုရင်ငယ် ၅ ပါး ပျံလွန်
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website AKN November 28, 2012 - 12:41 pm	This kind of unacceptable cases are everywhere in our country. We cannot blame the Police who have no responsibility at all to upkeep in order for such roads of horrible designs. Well known disastrous road is Yangon-Naypyidaw-Mandalay designed and constructed by incompetent and greedy culprits. Also, we are miserably observing this kind of wrongdoings are overwhelmingly continued in our country. We cannot image who is going to stop such offenses those continue to damage our economy effectively.
Reply	မေ November 28, 2012 - 3:15 pm	slow down တွေရှိတဲ့ လမ်းတွေမှာ ယာဉ်မောင်းရတာ ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ လမ်းတည်ဆောက်မှု့ကို သေချာတိုင်းတာပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ပညာရှင်များခေါ်ယူဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Reply	Soe Nyunt November 28, 2012 - 10:28 pm	It is the error of Project Construction Engineer U Ohn Lwin.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 29, 2012 - 3:29 am	ချပေးတဲ့ ဘက်ဂျက်အထဲက မသုံးမဖြစ် ကုန်ကျသလောက်ပဲ သုံးချင်တော့ ပစ္စည်းညံ့၊ ပညာရှင် ခေါ်ခကို အိတ်ထဲ ထည့်၊ မတတ်တခေါက်နဲ့ ထင်သလို ဖေါက်ထားတဲ့ လမ်းတွေ။ ဘာတဲ့ စာဖတ်နေတဲ့ ဘဘကြီး ဆွဲတဲ့ လမ်းဒီဇိုင်းတဲ့။ လုံးဝ မောင်းဘို့ အဆင်မပြေ တဲ့ လမ်း။
Reply	john smith November 29, 2012 - 8:03 am	မဟာဗန္ဓုလ တံတားနဲ့ပတ်သတ်လို့ပြုတ်သွားတဲ့ေ၇ကြောင်းညွန်မှုးဦးမြင့်သိန်းကိုမေးကြည့်(သက်၇ှိထင်၇ှား၇ှိသေး၇င်)သူဘာကြောင့်ပြုပ်လဲဆိုတာ၇ယ်ဒီတံတားကြီးမဆောက်ခင်ကတဲအမှားတွေ၇ှိမှန်းသိသိကြီးနဲ့အတင်းဆောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့သူတွေ၇ှိတယ်ဆိုတာ၇ယ်ကိုယ်အတ တစ်ခုကြောင့် ပေ၇ာဂကြောင့်ယနေ့အချိန်အထိအပြစ်မဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေ၇ဲ့အသက်တွေလောင်းကြေးထပ်နေ၇သေးတယ်ဆိုတာတွေအ၇ှက်မဲ့စွာလူလုပ်နေကြသေးတယ်ဗျို့
Reply	pnwara December 3, 2012 - 12:58 pm	ကားတွေ အများဆုံးတိုက်လေ့ရှိတဲ့နေရာမှာ ရဲတွေ များနိင်သမျှ များများထား- ဖြစ်နိုင်လျှင် တနိုင်ငံလုံးရှိသမျှ ရဲတွေ အကုန်ထား- ဘရိတ်ပေါက်လာတဲ့ ကားက တိုက်လို့ အကုန်သေကုန်ရင် အေးတာဘဲ- နောက်မှ သန့် ရှင်းတဲ့ ရဲအဖွဲ့ ပြန်ဖွဲ့ -